Aung Kyaw Paing – Medium
Icons areacrucial part of every app and software. They are more than justavisual component; they are the identity of your app. It’s important to represent what your app stands for in the icon. However, this is far from easy, especially when you have to support multiple…
Manifesting appName the right way
Recently, I was tasked to integrate an open source library into our project, and we did successfully so. Well, we thought we did until we saw that our app name was shown as empty strings in the logs. We know for sure we have an app name. If we didn’t…
If you’re developing Android apps, you might often wonder how does our PC communicate with the Android devices when we debug. Well, the answer is through the Android Debug Bridge, adb for short. When you run your app, the computer install the debug apk with adb install and launch the…
RecyclerView, in Android development, isavery useful first-party library which replaces traditional ListView. Over my career, I have seen some anti-patterns of RecyclerView and misunderstandings of its adapter concept. …
ကျွန်တော်ဒီ Blog Post Series လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ အတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေးနိုင်ဖို့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ mVoter 2020 Android App လေးထဲက Tech Stack တွေ အကြောင်းရယ်၊ ဘာလို့ဒီ Tech Stack တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို တစ်ခြားသူတွေလည်း ဗဟုသုတရအောင် မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ လွယ်မယောင်ယောင်နဲ့ နည်းနည်းလေး ခေါင်းစားခဲ့တဲ့ Countdown Timer လေးအကြောင်းပြောပြမယ်။
ကျွန်တော်ဒီ Blog Post Series လေးမှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် တိကျမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေးနိုင်ဖို့ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ mVoter 2020 Android App လေးထဲက Tech Stack တွေ အကြောင်းရယ်၊ ဘာလို့ဒီ Tech Stack တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို တစ်ခြားသူတွေလည်း ဗဟုသုတရအောင် မျှဝေပေးသွားပါမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ Fragment အစား တစ်ခြား View-based Controller လေးသုံးခဲ့တဲ့ပုံစံကိုပြပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့ စရေးကတည်းက Single Activity ပဲသွားမယ်လို့ပဲ စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က Fragment ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အခါက ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးဆွေးနွေးတော့ ကျွန်တော်က ရုံး project…
တက္ကသိုလ်မှာတုန်းက ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာသာတစ်ခုကို သီးသန့်သင်ခဲ့ရတယ်။ အဲတုန်းကတော့ ငယ်သေးတော့ ဒါတွေက အရေးကြီးမှန်း နားမလည်ခဲ့ဘူး။ အခုတော့ တော်တော်ကြီး စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် “gray area” လို့ခေါ်တဲ့ မှား/မှန်ပြောရခက်တဲ့အရာတွေ များတယ်၊ ဒီတော့ ဒီထဲမှာလည်း ကျွန်တော့်အမြင်ဘက်က ပြောထားတာတွေသာဖြစ်လို့ အတွေးအမြင်ကွဲလွဲနိုင်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်သူဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးတာက သူရဲ့ ကျင့်ဝတ်ပဲလို့မြင်တယ်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့အရာက လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်။ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ အချက်လက်ဒေတာရယူဖို့ ကိစ္စဖြစ်လာတော့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ခေါင်းထဲ ဘယ်ဟာက မှန်လည်း မှားလည်း အတွေးလေးတွေဝင်လာတယ်။ တစ်ခြားသူတွေလည်း ဒီလိုအတွေးလေးတွေဝင်ရင် အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော့်အမြင်တွေကို ချပြသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။…
Since the pandemic starts, my work has shifted to remote working, and this changesalot of things for me. But you’re not here to read about me talking about good and bad of remote work. So, I’m just gonna go ahead and give youalittle background on why…
I always wanted to look into how to make an open source Android project while hiding all the secrets from the source. And with the Burma election approaching and mVoter 2020 in development(Disclaimer : We’re unsure if the app will be released as of this moment), we finally got a…
Hi, I’m no longer on Medium, visit me at aungkyawpaing.dev